Duulimaadyada caalamiga ah ee Hindiya: hakinta oo la dheereeyey
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Duulimaadyada caalamiga ah ee Hindiya: hakinta oo la dheereeyey
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Duulimaadyada caalamiga ah ee Hindiya
Madaxweynaha Ururka Shaqaalaha Dalxiisayaasha Hindiya (IATO), Mr. Rajiv Mehra, ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay go'aanka ay qaadatay Wasaaradda Duulista Hawada ee India/DGCA ee lagu kordhiyay hakinta duullimaadyada caalamiga ah illaa September 30, 2021, iyo e-Dalxiiska Visa.
Madaxweynaha IATO wuxuu codsaday in la joogo waqtigii ay dowladdu soo dhex geli lahayd oo gacan ka geysan lahayd warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Mr. Mehra ayaa in muddo ah dabada ka riixayay furitaanka fiisaha e-Tourist.
Intaa waxaa dheer, ururkiisu wuxuu dhammaantood ka dambeeyaa dib -u -bilaabidda duulimaadyada caalamiga ah waxayna tilmaameen sida loo fulin karo.
Waxa uu sheegay in xubnaha IATO ay aad u niyad jabsan yihiin kana xun yihiin go’aankan ay dowladdu qaadatay. Mr. Mehra wuxuu yiri: “Waxaa la joogaa waqtigii ay dowladdu gacan ka geysan lahayd warshadaha dalxiiska iyadoo dib loo soo nooleynayo dalxiiskii gudaha ahaa ee Hindiya,” isagoo sharraxaya codsiyada soo socda ee loo jeediyay dowladda.
Mr. Rajiv Mehra, Madaxweynaha, IATO
- In la furo e-Dalxiiska Visa dhammaan dalxiisayaasha ajnabiga ah ee la tallaalay oo doonaya inay yimaadaan Hindiya. U oggolow dalxiisayaasha shisheeye inay rabaan inay u safraan Hindiya iyo in kale. Waa inaanan ku xaddidin inay u safraan Hindiya, markii dalal kale albaabadooda u fureen dalxiisayaasha.
- Sidoo kale, hawlihii duulimaadyada caalamiga ahaa ee caadiga ahaa waa in dib loo bilaabo, oo ha oggolaadaan shirkadaha duullimaadku inay rabaan inay shaqeeyaan iyo in kale haddii ay jiraan cillado culeys saaran. Laakiin dawladdu waa inay oggolaato dib u bilaabista duulimaadyada.
Dhammaan qeybaha kale waxay dib u soo nooleeyeen ganacsigoodii iyagoo taageero ka helaya Dowladda Hindiya, waana warshadaha safarka iyo dalxiiska oo kaliya oo halgan ugu jiray sidii ay u noolaan lahaayeen 18 -kii bilood ee la soo dhaafay iyadoon wax gargaar ah la helin haba yaraatee. Madaxweynaha IATO wuxuu ka codsaday dowladda inay taageerto warshadaha dalxiiska gaar ahaan hawl wadeennada dalxiiska ee soo gala oo aan lahayn wax ganacsi ah tan iyo Maarso 2020.
Dhawr maalmood ka hor, Mr. Mehra, ayaa ka qaybgalay a kulan uu ku baaqay Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha, Shri Piyush Goyal, si uu talooyin uga helo dhoofiyayaasha tallaabooyinka loo baahan yahay in laga qaado baaqa Ra'iisul Wasaaraha ee kordhinta dhoofinta
Kulankaas, Mr. Mehra wuxuu soo jeediyay tallaabooyin isku mid ah oo lagu oggolaanayo fiisooyinka dalxiiska elektaroonigga ah iyo in dib loo bilaabo hawlihii duulimaadyada caalamiga ahaa ee caadiga ahaa. Wuxuu sidoo kale u caddeeyay Wasiirka xaaladda maaliyadeed ee halista ah ee hawl-wadeennada dalxiisku ay soo mareen intii uu socday masiibada iyo sida loo sii daayay SEIS (Dhoofinta Adeegga ee Qorshaha Hindiya) sannad-maaliyadeedka 2019-20 ay muhiim u tahay badbaadadooda.